Arda Turan oo ku soo wajahay horyaalka Premier League, tallow waa kooxdii ayuu ku soo jeeda?… - Jazeera FM
Arda Turan oo ku soo wajahay horyaalka Premier League, tallow waa kooxdii ayuu ku soo jeeda?…
January 3, 2018 admin featured
Everton ayaa lagu soo waramayaa inay dalab u dirtay xiddiga Barcelona Arda Turan bishaan.
30 jirkaan garabka ka ciyaara ayaa la filayaa inuu ka tago Camp Nou bishaan ka dib qeybtii hore ee xilli ciyaareedka taasoo uu ku guuldareystay inuu ciyaaro daqiiqad hal talaabo tartan ah kooxda.
Arsenal ayaa lala xiriirinayay saxiixiisa bilihii u danbeysay, laakiin weli ma aysan xiiseynin inay dalab rasmi ah u diraan, sida Besiktas iyo Galatasaray ayaa sidoo kale lagu qiimeeyaa boosaska mustaqbalka.
Wargeyska Mundo Deportivo, wakiilka xiddiga Turkiga Ahmed Bulut ayaa la xiriiray labada kooxood ee Toffees iyo Talyaaniga AC Milan iyagoo isku dayaya inay soo bandhigaan dalabyo Barcelona ah, lakiin dhaqaalihii la sheegayaa ayaa la sheegayaa inay labada dhinacba iska saareen.
Turan ayaa haatan ku qaadanaya £ 120,000 todobaadkii Barca, waxaana uu ka cago jiidayaa inuu qaato mushaar dhimis, inkastoo qaar ka mid ah sheekooyinka ayaa soo jeediyay in lacagta la iibin karo laga yaabo in kooxda reer La Liga ay dooneyso inay ciyaaryahanka ka iibiso mushaarkiisa.
Heshiiska tooska ah ee lagu kala iibsanayo kubadsameeyaha Gunners Mesut Ozil ayaa sidoo kale loo soo yeeray suurtogalnimo bishii lasoo dhaafay.
The post Arda Turan oo ku soo wajahay horyaalka Premier League, tallow waa kooxdii ayuu ku soo jeeda?… appeared first on Goolasha.net.
← Shkodran Mustafi oo si diiran ugu hadlay arimaha xidigaha Ozil iyo Sanchez.
Manchester United oo diyaar u ah iney heshiiska u kordhiso xidigeeda →